Barnaamijka Tartan iyo Tacliin ee Radio Daljir oo caawa si rasmi ah u bilaabanaya. – Radio Daljir
Barnaamijka Tartan iyo Tacliin ee Radio Daljir oo caawa si rasmi ah u bilaabanaya.
Bossaso, Aug, 02 – Barnaamijka Tartan iyo Tacliin oo ay ku tartamaan dugsiyada sare ee Puntland sanad walba bisha barakaysan ee Ramadaan ayaa caawa si rasmi u furmaya, kaas oo ka qaybgalayaan 24 dugsi sare oo ku kale yaalla magaalooyinka Bossaso, Carmo, Ufayn, Qardho, Garoowe, Burtinle, Galkacyo iyo Buuhoodle oo dhammaantoodba laga dhagaysto Radio Daljir.
Tartan iyo Tacliin oo ay horay isaga kaashan jireen shirkadda isgaarsiinta ee Golis, daladda waxbarashada Ahliga ah ee PL iyo Radio Daljir ayaa sanadkaan waxaa ku soo biiray wasaaradda waxbarashada ee Puntland, taas oo muujinaysa baaxadda barnaamijkani leeyahay iyo xiisaha ay u qabaan dhinacyada kale duwan.
Barnaamijka oo la filayey inuu xalay bilawdo ayaa caawa furmaya, waxaana dib u dhaca halka habeen ah keenay sifo ay idaacaddu u baahiso xafladihii 1-da Augost ee sanad guurada 13-aad ee asaaskii Puntland.
Habeenka caawa ah ayaa waxaa qaybta hore ee barnaamijka ku tartami doona dugsiga Imaamo Nawawi Bossaso oo ku guulaystay tartankii sanadkii hore iyo dugsiga Muntadda Qardho, qaybta dambana waxaa tartami doona dugsiga Cumar Samatar Galkacyo iyo Sh. Xamdaan Bossaso.